अभिनेत्री जेनी कुवँरको पशुपति आर्यघाटमा यसरी भयो अन्त्येष्टी, कलाकार को को पुगे ? (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
अभिनेत्री जेनी कुवँरको पशुपति आर्यघाटमा यसरी भयो अन्त्येष्टी, कलाकार को को पुगे ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । बिहीबार राति आफु बसेकै अपार्टमेन्टमा मृ त फेला परेकी अभिनेत्री तथा निर्माता जेनी कुँवरको शुक्रबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टी गरिएको छ । उनको पार्थिव शरीरलाई भतिज जीवन कुँवरले दागबत्ती दिएका छन् । अन्त्येष्टी अगाडि उनको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पशुपति क्षेत्रमै केही घन्टा राखिएको थियो ।
Prevमन्त्रालय ले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सूचना : भाेलि बिहानै देखि ७७ जिल्लामै यस्तो हुने?
Nextअभिनेत्री जेनी कुवँरको पशुपति आर्यघाटमा यसरी भयो अन्त्येष्टी, कलाकार को को पुगे ? (भिडियो हेर्नुस्)
बाडिले पनि बगाउन नसकेको शिबको मूर्तिलाई ॐ शिवाय लेखेर 1 Share गर्नुहोस सोचेको पुग्छ